GAROOWE, Puntland - Wafdi uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah gaarey magaalada Garoowe, ee caasimadda Puntland.
Waxaa Ra'iisul Wasaare Kheyre Garoonka Diyaaradaha si diiran ugu soo dhaweeyay Mas'uuliyiin uu horkacayo Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, shacab ku lebisan calamada Puntland iyo Soomaaliya.
Amniga ayaa si aad ah lo adkeeyay, iyadoo wadooyinka lagu xiray boorar lagu xardhay sawirka Ra'iisul Wasaare Kheyre, oo ay ku qoran yihiin hal-ku-dhigyo soo dhaweyn ah.
Kheyre oo mudo maalmo ah ku sugnaan doona Puntland, ayaa lagu wadaa inuu ka qeyb-galo xuska sanad-guuradda 20-aad ee kasoo wareegatay aas-aaska Puntland, oo lagu wado inay dhacdo 1-da August, 2018.
Waa booqashadii ugu horeysay oo Khayre uu ku tago Puntland tan iyo markii xilka Ra'iisul Wasaare loo magacaabay Febuary 2018, iyadoo safarkiisana uu kusoo beegmayo xilli xiriirka Xukuumadiisa iyo maamulka Gaas uusan wanaagsaneyn.
Gaas ayaa ku casuumey Khayre inuu yimaado Puntland, waxaana wararka uu helayo Garowe Online ay sheegayaan inuu geyn doono Tuuladda Garacad, si uu u dhagax dhigo Dekad cusub oo halkaasi laga dhisayo. [Halkan ka akhri Warbixinta].
Puntland ayaa sanadkan u dabaal dageysa sanad-guuradda aas-aaskeeda xilli ay wajahayso caqabado amniga ugu horeeyo, sidoo kalena dagaal kaga furan yahay dhanka gobolka Sool, oo Somaliland degaanka Tukaraq ka qabsatay Jan 8, 2018.
Siyaasi Maxamed Faroole ayaa sheegay inuu jiro walaac ku saabsan in Madaxweynaha...